काठमाडौँ, असोज ४ गते । कोरोना भाइरसको महामारीबीच सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि विद्यालयमा जान विद्यार्थी भने त्रसित छन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने र त्यसले बालबालिकालाई बढी प्रभावित गर्ने आकलन गरिसकेको छ ।
तेस्रो लहर आउने र त्यसमा बालबालिकालाई असर गर्ने भएकाले हरेक अस्पतालमा २० प्रतिशत श-या छुट्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । लामो समयसम्म घरमै बसी अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय जाँदा रमाइलो महसुस त भएको छ तर कोरोना यथावत् रहेकाले त्रसित वातावरणमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत नदिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थासँंग समन्वय र स्थानीय तहको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कम भीडभाड तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अब १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि पनि कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने तयारी भइरहेकोले छिट्टै खोप आउने र बालबालिकाले खोप लगाउन पाउने डा. पौडेलले बताउनुभयो । अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले उच्च जोखिम तथा घना बस्ती भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै जनघनत्व कम भएका ठाउँ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले अब पनि विद्यालय सञ्चालन नगरे नेपालको शिक्षा धेरै पछाडि पर्ने बताउनुभयो । अहिले ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र अनलाइन कक्षा लिइरहेको भन्दै उहाँले हुनेखानेहरूले अनलाइन शिक्षा लिने र विपन्न वर्गले नलिने गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो खाडल आउने बताउनुभयो । अभिभावकहरूले नारा जुलुस, जात्रा गर्न हुने तर विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने तर्क उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।